विकल्पको खोजीमा - Chautari Post Online
चुनावको समयमा मत माग्ने क्रममा चप्पल लगाई प्रत्येक नागरिकहरूको घरदैलोमा पुगी ढोग्नसमेत पछि नपर्नेहरूले देखाएका सपनाहरू कहाँ पुगे ? सत्ताले सम्पूर्ण कुराहरू बिर्साइदियो र भविष्यको समेत ख्याल गर्न पछि परे । उनीहरुको सुविधाले त यो विलासिता भ्याउँदैन, अन्य आयस्रोत कमाइके छ ? प्रश्न यहाँनेर खडा भैरहेको छ । यतिले नभ्याएर अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरू सवार गर्ने क्रममा अघिपछि, ५–७वटा सुरक्षा निकायका गाडीहरूमा बन्दुक तेस्र्याई हामी नागरिकहरूमाथि डर, त्रास देखाई हाम्रो मानवअधिकारको खिल्ली उडाई, ट्राफिक जाम गरी बाटो नै बन्द गरिन्छ । यसरी सुत्केरी, अति सिकिस्त बिरामी लिएर अस्पताल जाँदै गरेका एम्बुलेन्ससमेतघन्टौँ जाममा पर्छन् र समयमा उपचार हुन नसकी मृत्यु ग्रहण गर्न पुग्छन् । अनि के यही हो त शान्ति, सुरक्षा र अमनचैन तथा सुखी–समृद्ध नेपालको परिकल्पना ? भन्न के सकिन्छ र इन्दिरा गान्धीलाई आफ्नै अङ्गरक्षकले गोली हानेको थियो । यसरी त्रसित र भयभीत हुनुपर्ने कारण नै के छ र ? नागरिकहरू नेताका, नेताहरू नागरिकका । एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा । अतः यसरी अनावश्यक रूपमा डर, त्रास देखाउनु शक्तिको दुरुपयोग गर्नु, चाहे जोसुकै होस् आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यै गाउँठाउँमा आउनु पर्ला । त्यतिखेर न्याउरी मारी पछुतो नहोस् । पद, शक्ति र आर्थिक दुरुपयोग नगरियोस् । उपरोक्त विकृति र विसङ्गतिहरूको निराकरण हुनुको अलावा दिनप्रतिदिन उग्ररूप लिँदै गएकाले अब नेपाली नागरिकहरू विकल्पको खोजीमा लागिसकेका छन् । त्यो हो क्रान्तिको बाटो ।६ असार २०७६, शुक्रबार ०६:३५ ई-रातो खबर
Prevतरकारीको मूल्य दोब्बर
Nextमन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी, योगेश बन्न सक्छन् पर्यटनमन्त्री